Qaramada Midoobay oo Baaraysa Musuq-Maasuq lagu soo Eedeeyay Shirkadda Soma Oil Gas – Radio Daljir
Qaramada Midoobay oo Baaraysa Musuq-Maasuq lagu soo Eedeeyay Shirkadda Soma Oil Gas
Agoosto 4, 2015 1:39 b 0
Talaado, Ogoosto 04, 2015 (Daljir) — Iyadoo uu Xafiiska Britain ugu qaabilsan La-dagaalanka Musuqa ee SFO baaritaano ku hayo Eedeymo la xiriira in Madaxda Shirkadda shidaalka iyo Gaaska baarta ee Soma Oil and Gas lagu tuhmayo inay Lacago is-daba mariyeen ayaa waxay Baarayaal ka socda QM sheegeen in Shirkadaasi oo laga leeyahay dalka Britain ay boqolaal kun oo Dollar siiyeen Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Macdanta iyo Kheyraadka Dabiiciga ee Somalia.
Warbixin ay QM soo saartay, oo ay Wakaalladda Wararka ee REUTERS iyo Idaacadda BBC-du loo dusiyey ayaa lagu muujiyey inay Shirkadda Soma Oil and Gas bixiyeen lacag dhan 490,000 oo Dollar oo u dhiganta 315,000 ee Lacagta Giniga ama Pound-ka ee Britain.
Bixinta Lacagahaasi loo gudbiyey Wasaaradda Macdanta iyo Kheyraadka Dabiiciga ee Somalia ayaa la sheegay inay bilaabantay bishii June ee sannadkii hore ee 2014-kii.
Baarayaasha QM waxay sheegeen in Lacagaha ay Shirkaddaasi bixiyeen ay sababo dhowr ah darted u muuqdaan fal lagu itaal yareyanyo Hay’adda Somalia, iyagoo loo marayo Wax is-dabamarin ama Musuq.
Dhinaca kale, Wakaalladda Wararka ee REUTERS oo aragtay nuqul ka mid ah Warbixinta Baarayaasha QM ayaa sheegtay inay Shirkadda Soma Gas and Oil siisay Wasaaradda Batroolka Somalia lacag dhan 490,000 oo Dollar muddo hal sanno ah, iyadoo inta badan lacagta la sheegay in loo adeegsaday Mushaar, iyadoo ku-dhawaad 40,000 oo Dollar oo ka mid ah Kharajkaasi la sheegay in lagu iibiyey Qalab Xafiiseed.
Wakaalladda waxay xustay in Warbixinta QM farta lagu fiiqay inay Sirkadda Soma Gas and Oil siiyeen Garyaqaan La-taliye u ah Wasaaradda Batroolka ee Somalia, kaasi oo dhexdhexaadin ka galay Qandaraas ay Shirkadda Soma Gas and Oil la saxiixatay Wasaaradda Batroolka ee Somalia, waa sida lagu xusay Warbixintaasi oo ka koobnayd 28-bog.
Guddiga Baarayaasha QM ee diyaariyey Warbixintaasi oo tiradoodu dhan tahay 8 qof waxay kaloo tilmaameen inay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Batroolka, Farah Abdi Hassan iyo Ku-xigeenkiisa, Jabril Mohamoud Geeddi ka mid yihiin Saraakiisha lala xiriirinayo, waa sida Warbixinta QM lagu muujiyey.
Baarayaasha QM waxat kaloo sheegeen inay Shirkadda Soma Gas and Oil bishii December ee sannadkii hore u gudbiyeen Wasaaradda Batroolka Somalia lacag dheeraad ah oo dhan 100,000 oo Dollar, si magaalladda Muqdisho looga dhiso Qol lagu kaydiyo Xogaha Sahminta.
Warbixinta ayaa lagu sheegay inay ogaadeen Bishii June inaan wax horumar ah laga samaynin Dhismahaas, iyadoo Saraakiisha Wasaaradaasi midkoodna uusan tirinin Lacagahaasi, ama aysan ka jawaabin codsi lagu weydiiyey in ay ka warbixiyaan.
Dhinaca kale, Wakaalladda Wararka ee REUTERS waxay sheegtay inay la xiriireen Wasiirka Batroolka iyo Kheyraadka Dabiiciga ee Somalia, Mohamed Mukhtar Ibrahim, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Batroolka, Farah Abdi Hassan iyo Ku-xigeenkiisa Jabril Mohamoud oo ay REUTERS dhowr jeer la xiriirtay wey ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrinkaasi.
Madaxa Xiriirka Gudaha ee Wasaaraddaasi, Ibrahim Hussien oo ay REUTERS la hadashay wuxuu ku gaabsaday inuusan weli arkin Warbixintaasi.
Si kastaba ha ahaatee, Baaritaanka QM iyo Dowladda Britain haatan wadaan ayaa u muuqata in raadka Baaritaanku ku soo biyo shubto Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Somalia iyo Shirkadda Soma Gas and Oil ee Qandaraaska lagu siiyey baaritaanka iyo iib-geynta Shidaalka iyo Gaaska Somalia.
HRW oo Dowladda Somalia uga digtay in la dhibaateeyo Dumarka Soomaaliyeed
(Dhagayso) Barnaamijka Saakay Iyo Dunida – 04_August_2015 – Wariye Maxamed C/llaahi Cali (Kooshin)